आइपीएलः ५० रन नबनाउँदै विराटको टिमले गुमायो ६ विकेट ! - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः ५० रन नबनाउँदै विराटको टिमले गुमायो ६ विकेट !
काठमाडौं, चैत १९ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) अन्तर्गत सनराइजर्स हैदरावादले दिएको २३२ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा विराट कोहली नेतृत्वको रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरले ५० रन नबनाउँदै ७ विकेट गुमाएको छ । बैंग्लोरका लागि कप्तान विराट कोहलीले ३, पार्थिव पटेलले ११, एडी डी विलियर्सले १, मोइन अलिले २, शिववम दुवेले ५ रन बनाए ।
बैंग्लोरको टिमलाई ध्वस्त पार्न मोहम्मद नाबी एक्लैले ४ र सन्दीप शर्माले एक विकेट लिइसकेका छन् । यसअघि, टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएको हैदरावादले हैदरावादले निर्धारित २० ओभरमा २ विकेट गुमाउँदै २३१ रन बनायो ।